आज देशभर एकसाथ पत्रकार महासंघको निर्वाचन « तपाईंको साझा इजलास
चैत्र २९, २०७७ आईतबार
को विस्थापित हुनुभएको छ ? आउनुहोस् घर दिन्छौं : मेयर ओली,
झापामा थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि,
विद्यालय बन्द नगरौं, सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरौं : प्याब्सन,
आज देशभर एकसाथ पत्रकार महासंघको निर्वाचन
झापा । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज देशभर एकसाथ निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको नेतृत्व चुन्न देशैभर एक साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुन लागेको हो ।
केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित शाखाहरुको नेतृत्व चयनका लागि महासंघले एक साथ मतदानको व्यवस्था मिलाएको छ । देशभरका करिब एक सय मतदान केन्द्रबाट महासंघका १३ हजार सदस्यले मत दिने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक कपिल काफ्ले जानकारी दिएका छन् ।
महासंघको नेतृत्वमा पुग्न विभिन्न राजनीतिक दल निकट पत्रकारका संघठनहरुले प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । यस्तो प्यानल केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला हुँदै शाखाहरुसम्म बनेको छ ।
अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म विभिन्न पदका लागि हुने निर्वाचनमा कतिपय जिल्लाहरुमा भने निर्विरोध घोषणा पनि गरिसकिएको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिको ४९ पदाधिकारीका लागि मतदान हुनेछ भने प्रदेश र शाखाहरुले पनि आ–आफ्ना समिति निर्माणका लागि निर्वाचन गराउने छन् । निर्वाचनमा १३ हजार १२२ मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि विपुल पोखरेल र निर्मला शर्मा प्यानलसहित चुनावी मैदानमा रहँदा गजेन्द्र बुढाथोकी महासंघमा शुद्धीकरणको नारासहित चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन् । उम्मेदवारहरुले श्रमजीवि पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र पत्रकार महासंघको शुद्धीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।
को विस्थापित हुनुभएको छ ? आउनुहोस् घर दिन्छौं : मेयर ओली
विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक। दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले दमक नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बसोबास गर्दै
झापामा थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि
विर्तामोड । झापामा आज ४ महिला सहित थप ५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको
विद्यालय बन्द नगरौं, सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरौं : प्याब्सन
काठमाण्डाै – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले विद्यालय बन्द गर्ने नभइ सावधानी अपनाएर
चारपानेका महिला नौमति बाजा संरक्षणमा सक्रिय
विर्तामोड । लोप हुँदै गएको नौमति बाजा संरक्षणमा महिलाहरुले सक्रियता देखाएका छन् । झापा विर्तामोड–२
निजी छोडेर टेलिकमको इन्टरनेट जोढ्ने बढे
हुलाकी राजमार्ग : आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न
मोहनमायाले अब लालपुर्जा पाउछ : खरेल